Soomaaliya: Qarax lagu hoobtay oo galabta ka dhacay Muqdisho (Video) – Kasmo Newspaper
Updated - October 14, 2017 5:12 pm GMT
London (Kasmo), Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa loo adeegsaday, qarax xooggan, oo galabta ka dhacay Muqdisho, agagaarka Wasaaradda Arrimaha dibadda iyo Hutel Safari oo qayb ahaan burburay.
Wararka ayaa sheegaya in ilaa 40 qofood ku dhinteen, Sarkaal u hadlay Boliska Muqdisho, Mahad Cabdi Gooye, ayaa laga wariyay in tiradu ka sii badan karto, iyada oo dhaawactyadu buuxdhaafiyeen Isbitaallada Caasimadda.
Ma ahan markii u horreysay oo qarax uu ka dhacayo goobaha masgquulka badan ee saaran waddada muhiimka ah ee Muqdisho ku xirta Afgooye iyo agagaarka Km 4 iyo 5 laakiin khasaaraha qaraxaan waa mid aan noociisa oo kale horey uga dhicin Muqdisho.
Qarax 2aad oo la sheegay in uu isla galabta ka dhacay Degmada wadajir, agagaarka Xaruntii Somali Airlines waxaa ku dhimatay 2 qofood. Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta Dowladda Soomaaliya ayaa lagu tuhunsanyahay mas’uuliyadda qaraxyadaan ugu dambeeya.
Qaraxaan ayaa ku soo beegmaya 2 maalmood oo qur ah ka dib markii ay is casileen Wasiirkii Gaashaandhigga iyo Taliyihii Xoogga Dalka, iyada oo wali xal loo raadinayo is mariwaaga siyasadeed ee Xukuumadda Dhexe iyo Maamullada Gobollada.
Nabadgalyada magaalada Muqdishoo oo waayadaan ka soo raynaysa, falalka qaraxyada, dilalka iyo shilalka argagixiso ee ka dhacay, 8dii bilood ee u dambaysay, laga soo bilaabo bartamihii Febraayo 2017, waxay marayaan hadda 89 dhacdo